Virosy tazo Nile amin'ny soavaly | Soavaly Noti
rose sanchez | | Aretin'ny soavaly
NyTazo Nil amin'ny soavaly A aretina viral, ateraky ny flavivirus fantatra amin'ny anarana hoe West Nile Virus, izay mampiasa moka ho fiara fitaterana. Aretina mbola tsy fantatra io.
Ireo faritra misy fiparitahan'ny otrikaretina lehibe indrindra dia ireo izay misy a moka avo kokoa sy hakitroky ny vorona, izay mifanitsy amin'ireo faritra misy toetrandro mahonon-tena sy mando izay misy rano manangona, toy ny faritra honahona, renirano, ary farihy, izay ahitàna moka sy vorona marobe.
1 Ahoana ny fomba ampitana azy
Ahoana ny fomba ampitana azy
Ny moka dia mahazo ny tsimok'aretina amin'ny alàlan'ny fihinanana vorona voan'ny aretina ary amindrany ny viriosy amin'ny vorona, biby ary na olona aza. Noho izany dia lasa vector ny aretina. Rehefa a manaikitra amin'ny soavaly ny moka, ny viriosy dia miditra amin'ny lalan-dran'ny soavaly avy aiza, tsy izy no mpampiantrano voajanahary, dia manjavona ao anatin'ny fotoana fohy.
Ilay moka vao tratry ny aretina dia afaka mamindra ny otrik'aretina amin'ny olona sy soavaly. Samy heverina avokoa na ireo na ny olona vahiny maty satria na dia voan'ny aretina aza izy ireo dia tsy manaparitaka ilay aretina. Ny soavaly voa dia tsy atahorana ho an'ny soavaly hafa.
Anisan'ireo soritr'aretina mety ho voamarika ny tsy fahazotoan-komana, fahakiviana, fiovan'ny fitondran-tena, molotra ambany molotra, mitelina olana, niova ny reflexes amin'ny tarehy sy ny fahatsapana, nihena ny fahitana, fikitroha-nify, fahalemen'ny ankapobeny. Na dia mety voan'ny virus aza ilay soavaly nefa tsy mampiseho famantarana ara-pahasalamana. Matetika izy io dia tsy mampiseho sarin'ny tazo.
Tsy misy fitsaboana manokana amin'ny tazo Nile.Halefakainao fotsiny ireo soritr'aretina amin'ny alàlan'ny fanomezana fampiononana. Ho sitrana tsikelikely ilay soavaly.
Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny soavaly tsy ho voan'ny virus Nile dia ny fisorohana. Ny voalohany dia ny vaksiny. Aza atao tratran'izany any amin'ny faritra misy ny moka. Cfametrahana harato moka ao anaty vala ary koa ny fampiasana bibikely.
Halaviro ny fanangonana rano miangona satria io no tena loharano anaovana ny moka. Ary indrindra amin'ny fotoan'ny taona izay be indrindra ny moka, dia tokony hatao avo roa heny ny ba kiraro mba tsy hahavoa sy hanaikitra ny soavaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Aretin'ny soavaly » Virosy tazo Nile amin'ny soavaly
Vaksinina manohitra ny rhinopneumonitis